Margarekha मृत्युपछि शरीरमा के हुन्छ ? एक चोटी अवश्य पढौउ – Margarekha
मृत्युपछि शरीरमा के हुन्छ ? एक चोटी अवश्य पढौउ
यसका लागि उसले प्रयत्न पनि गरिहन्छ। यस्तोमा दाहसंस्कार गरियो भने आफ्नो प्रियजनको जीवन अब चाहिँ सकियो भन्ने महसुस जीवितहरुलाई हुन्छ। मृतकको प्राणले पनि शरीर नै नरहेपछि अब मैले प्रयत्न गर्नु व्यर्थ छ भन्ने महसुस गर्छ र शान्त रहन्छ। यस्तो शान्ति जीवित र मृतक दुवैका लागि लाभकारी हुने मृत्युसम्बन्धी उल्लेख गर्ने विभिन्न हिन्दू धर्मशास्त्रको मत छ।स्वास्थय खबर पत्रिकाबाट
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार १३:५७ प्रकाशित